प्रा.डा. विष्णु राई, जेठ २७, २०७८
&#39;पारि पाखापहिरो गयो वारि बगेँ म तिम्रो वास खोला पारि वारि रहेँ म&#39; यस गीतका सङ्गीतकार भानुभक्त ढकाल हुनुहुन्छभने गायक पूर्ण राई ।दुवै स्रष्टालाई सम्मान गर्न चाहन्छु ।तर यो अवस्थासम्म हालसम्म मैले भने दुवै जनालाई चिनेको छैन ।यो गीत सम्भव...
प्रा.डा. विष्णु राई, चैत्र ३१, २०७७
युवतीका आँखाको भाका, हातकाे इसारा : जसले 'कसरी बोलाऊ ...' बोलकाे गीत सृजना गर्न बाध्य बनायाे
प्रा.डा. विष्णु राई, पुष १, २०७७
&#39;कसरी बोलाऊ मान्छेको भिडमा आजै हो देखेको नबोलाऊ भने अरुले लग्ला भूल पर्ला जीवनको &#39; यो मेरो लोक प्रिय गीतमासंगीतबद्ध गर्ने कामवरिष्ठ संगीतकार शान्तिराम राईले गर्नु भएको हो । यो गीतलाईवरिष्ठ गायक ओम गुरुङले गाउनु भएको छ ।यो गीतको शब्द...
सन्दर्भ 'छुटौँ अब दिन ढल्यो भेटौँ कुनै दिन' : 'के भो तिमीलाई, अनुहार त फुङ जलेछ नि ? हेर यो उमेरमा' !
प्रा.डा. विष्णु राई, कार्तिक १३, २०७७
&#39; छुटौँअब दिन ढल्यो भेटौँ कुनै दिन धेरै पछि भेट भयो तिमीसँग यो दिन यति राम्रो मुहारको कसरी झरयो जून यो उमेरमा शिरफूलको कसरी डुब्यो जून सोधी हाले माफ रहोस बितेका तिम्रा दिन ।&#39; खोटाङ बजारमा कार्यक्रम सकेर केही युवाहरुकोसाथ...
प्रा.डा. विष्णु राई, भदौ १६, २०७७
&#39;चखेवा भन्ज्याङ बादलले छोप्यो करायो झ्याउँकिरी किन न हो रुन्छ गुराँसे भिरमा वियोगले न्याउली ।&#39; .... गीत सृजना गर्न भावनाले मात्र पुग्दैन लेख्ने अभ्यास चाहिन्छ । अभ्यस्त भएको मनलाई छोयो भने लेख्ने समय र वातावरण भए पुग्छ । यो गीतको...
प्रा.डा. विष्णु राई, असार २७, २०७७
जमाना हिरोको संविधान सिनेमामा हिरो खूब खेल्यौँ टिकट काटेर हेरेँ अलिक झेली कथा लेखेछौ विरोधीको हल्का गर्धन रेटेछौ विक्षिप्त मृत्युपछि तिमी हाँसेको सिन पटक्कै मन परेन क्रूर शासकले पनि यो हद गर्दैन मन्दिरमा त खूब धर्मको घन्टी बजाएर पुण्य गरेँ...
प्रा.डा. विष्णु राई, असार ११, २०७७
मानिसको भोगाइ अनुभूति, जीवन शैली दृष्टिकोण फरक हुन्छ । मानव शास्त्रीको भनाइमा उसले बाँचेको प्रकृतिको प्रभाव हुन्छ । मेरो जीवनसँगको प्राकृतिक सामीप्य यो गीतको स्रोत हो । त्यो विकट प्रकृतिले गीतको जन्म भएको हो । गीतको संरचनात्मक पृष्ठभूमिमा नै दुई...
प्रा.डा. विष्णु राई, जेठ २२, २०७७
&#39;मन्दिरमा फूल चढाइ ढोगेँ तिमीलाई भनेर रातभरि रोएँ सपना देखि नराम्रो लागेर ।&#39; मेरो शब्द भएको यो गीत सम्भवतः २०५० सालमा रेकर्डिङ भएको हो । सङ्गीतकार प्रसिद्ध संगीतकर्मी शिलाबहादुर मोक्तान हुनुहुन्छ भने प्रसिद्ध गायिका कुन्ती मोक्तान हुनुहुन्छ । सङ्गीतकारले ज्यादै...
प्रा.डा. विष्णु राई, जेठ १, २०७७
&#39;जुनेली रातमा साटेको रुमाल खोइ कता झरेछ बादल भित्र सुस्तरी बोल्दा सबैले सुने छ । &#39;......... यो मेरो रचना भएको गीत रेडियो नेपालमा २०५३ सालमा रेकर्ड भएको हो । वरिष्ठ सङ्गीतकार बुलु मुकारुङले सङ्गीत गर्नु भएको छ यस गीतमा ।गीतमा...
प्रा.डा. विष्णु राई, बैशाख ११, २०७७
&#39;छेकेर बाटो जूनले सोध्यो कता हिँडेको&#39; यो गीतभित्र विशुद्ध कल्पनाको काव्यिक लहरहरू मात्र छ ।आफ्नै आनन्दको लागि लेखेको हुँ, जुन अरूमा पनि वितरण गर्न मात्र प्रयास गरेको हुँ । जीवन विचारको संवेग भरिएपछि मात्र बाहिर प्रकट हुँदो रहेछ । ओशोले...
प्रा.डा. विष्णु राई, चैत्र २७, २०७६
हरेक मान्छे गीतको आफैमा स्रोत हो ।भोगाई फरक हुनसक्छ तर समय उस्तै हो ।तसर्थ मेरो भोगाइको अवस्था अरूसँग जस्ताको तस्तै नमिल्न सक्छ, तर वास्तविकता भने उस्तै हुनसक्छ ।र, त संसारका मान्छेको अनुहार एक आपसमा मिल्दैन । गीत,के हो मलाई पनि...
प्रा.डा. विष्णु राई, चैत्र १३, २०७६
बाँधिन लाग्दा मायाको बन्धन तीन तारा डुबेछ धेरै थियो रातमा कुरा उज्यालो भएछ प्रसिद्ध गायक रामकृष्ण ढकालले गाएको गीत हो यो । संंभवतः मेरो रचनामा रहेको यसगीतबाट रामकृष्णलेरेकर्डिङ यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए । त्यसै कारणले रामकृष्णको आफ्नो पहिलो एल्बममा यो...
प्रा.डा. विष्णु राई, फाल्गुन २९, २०७६
कुनै पनि गीत सिर्जनामा मानिसहरूको जीवनका भोगाइ, दुःख, सुख र अनुभूतिको प्रभाव परेको हुन्छ । यस्ता सिर्जनामा उमेर र वातावरणको त झनै प्रभाव नपर्ने कुरा नै भएन । मेरा एक दर्जनभन्दा बढी रेकर्ड भएका गीतहरूमा पनि यस्तै परिवेश, उमेर र...